Ny IMC Kalium dia miankina amin'ny Dredge Ellicott® Bucketwheel -Ellicott Dredges
IMC Kalium dia miankina amin'ny Ellicott® Bucketwheel Dredge ao amin'ny toeram-pitrandrahana fosfatana faran'izay kely indrindra eto an-tany
Jona 30, 2011
Source: Famoahana gazety an-tserasera IMC
Miaraka amin'ny fahafaha-maherin'ny folo tapitrisa taonina fohy, IMC Kalium dia anisan'ny mpamokatra potash malaza sy ambany indrindra eto an-tany. Miaraka amin'ny varotra net 1997 sy marbra marobe mitentina $ 617.4 tapitrisa ary $ 237.7 tapitrisa, ny sampana fandraharahana dia maneho ny 14% amin'ny fahaiza-manao manerantany.
Ny vokatra potash an'ny IMC Kalium dia amidy tany amin'ny firenena mihoatra ny 20 nandritra ny taona 1997. I China no mpanjifa mpanondrana lehibe indrindra ao amin'ny orinasan'ny orinasa, ary ny fivarotana an-dranomasina dia nahitana 18% ny fandefasan'i Kalium nandritra ny taona. Ny fandefasana an'ireo mpampiasa fambolena sy indostrialy amerikana dia 55% sy 13% tsirairay avy. Ny fambolena sy ny indostrialy kanadiana dia niisa 4% amin'ny fandefasana manontolo.
IMC Kalium dia miasa ao amin'ny toeram-pitrandrahana dimy any Kanada ary ny toeram-pitrandrahana telo any Etazonia Ny IMC Kalium dia mamaritra ny Belle Plaine, Saskatchewan Canada, toeram-pitrandrahana vahaolana ho toy ny “toeram-pitrandrahana potash lafo vidy indrindra eto an-tany.” Izy io dia mamokatra muriate fotsy madio madio madio indrindra ho an'ny tsenan'ny indostria.
Ho fanarenana ny vilany dia mampiasa Ellicott ny fitrandrahana Belle Plaine® B-490 fandefasana sigara herinaratra vita amin'ny herinaratra izay nanatanteraka nandritra ny taona maro.
IMC Kaliumthrough ny fampiasana ireo famoahana etona fanaraha-maso sy famoronana crystallization.
Fa ny vahaolana dia voatsofoka ao anaty dobo fametrahana mangatsiaka 130-acre izay misy ny fihenan'ny crystallization ary ny vokatra vokarina dia haverina amin'ny alàlan'ny Ellicott® mitsingevana mitsingevana. Potash voadio dia ampirimina, maina sy fatra.
The Product - IMC Kalium dia manamboatra vokatra fangaro maro isan-karazany, ny sasany amin'izy ireo amin'ny alàlan'ny dingana vita. Manomboka amin'ny fanorotoroana ny vongany izay manasokajy ny saosy sy ny sira tsirairay tsy latsaky ny 3 / 8 santimetatra. Afangaro miaraka amin'ny masira brine, vahaolana masira ary aompina amin'ny rindrina 10-mesh ny oram-bary, izay eo amin'ny efijery eo am-baravarankely. Ireo singa lehibe lehibe nafindran'ny efijery dia mandeha any amin'ny Heavy Media. Misy singa kely arotsaka ary tonga any Flotation. Amin'ny toe-javatra misy ny efitrano fifehezana afovoany amin'ny informatika, ny fihenan'ny fiasan'ny tarehy dia manara-maso hatrany mba hiantohana ny vokatra kalitao.
Heavy Media - Amin'ity dingana ity, ny vongan'ny potash sy sira lehibe tsy mitovy ary afangaro amin'ny brine sy magnetite. Ny fahasamihafana manokana an'ity vahaolana haino aman-jery mavesatra ity dia ny potasy dia hitsinkevoana amin'ny fotony ary hidina amin'ny farany ambany ny sira sy ny loto. Ny potasy mitsinkafona, na ny sombintsombiny coarse lehibe dia avy eo manasa, de-brined ary maina. Ny sasany singa, antsoina hoe middlings, dia tsy misaraka amin'ny fizotran'ny haino aman-jery mavesatra. Novolavolaina indray izy ireo, nasandratra ary hoentina an-dàlana.
Flotation - Voalohany, ny fitaovana sy ny brine tsy misy ketraka dia esorina amin'ireo singa kely tsy amin'ireto ireto ao anatin'ny dingana iray antsoina hoe desliming. Manaraka izany, ny voanjo dia misy région simika izay mitaona ny sombin-javatra misy azy. Ary afangaro amin'ny brine iny. Ity slurry ity dia ariana ao anaty fiara mifono vy ary atsofoka ao anaty fifangaroana ny rivotra. Ny singa mifangaro amin'ny potash dia mifikitra amin'ny banga an'habakabaka ary miakatra amin'ny velaran'ny famokarana naoty na fenitra mahazatra. Potika ny potash, potehina ary maina. Ny sira tsy misy marary dia milentika any ambany.
Crystallization - Ny lamandy, na vovoka potash, dia averina ao anaty mpanangona vovoka ary amin'ny dingan-dry scavenger flotation. Voaporitra ao anaty brine mafana ny lamandy ary miverina indray amin'ny alàlan'ny hatsiaka amin'ny dingana telo, mamokatra kristaly misy potasy (White Muriate) kokoa. Ireo kristaly ireo dia voahosotra sy maina. Ny White Muriate dia azo ahitsy amin'ny 99.9 isan-jatony madio KCL voadio amin'ny alàlan'ny famerenana ny crystallization. Ny KCl voadio dia avo amin'ny fahadiovana ary ampiasaina amin'ny indostria simika.
Compacting - Potash grama grama dia vita amin'ny fametahana tsindry mavitrika amin'ny marika «Standard» sy «standard standard» ao anaty «flash potash» izay potipotika ary anaovana ny habeny.
Dingana iray fanampiny - Ny ankamaroan'ny salan'isa dia manao fitsaboana manokana mba hiarovana azy ireo mandritra ny fandefasana. Raha maina ny vokatra iray dia mitatra ny vovoka. Raha mando be dia be ny mofomamy. Mba hisorohana ny vovoka na caking dia hamafaina miaraka amin'ny menaka sy amine ny vokatra alohan'ny entana. White Muriate dia tsaboina miaraka amine; Ny kCl voadio dia tsy mila fitsaboana.
Notsongaina tao amin'ny Famoahana Gazety Global Press IMC sy ny pejin-tranonkala IMC Kalium